Antoine Griezmann oo markale albaabka u furay kooxda Barcelona – Gool FM
Liverpool oo garoonkeeda Anfield saddexda dhibcood kaga qaaday kooxda Sheffield United… +SAWIRRO
Kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo barbaro ku heshiiyay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah Kooxaha Liverpool iyo Sheffield United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Real Madrid oo guul ay u qalantay ka soo heshay Barcelona kulankii la wada sugayay ee El Clásico… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Man United iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Kooxaha West Ham United iyo Manchester City oo barbaro ku kala baxay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka El Clásico Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah ee Kooxaha West Ham United iyo Manchester City oo la shaaciyey… (Pep Guardiola yuu ku bilaabay kulankan?)
Lionel Messi oo hoggaaminaya xiddigaha goolasha ugu badan ka dhaliyey kulanka El Clasico… (Kaalintee ayuu ka soo muuqday Cristiano Ronaldo?)
Waa kuwee saddexda Kooxood oo wada doonaya inay bisha Janaayo la wareegaan daafaca Chelsea ee Emerson Palmieri?
Antoine Griezmann oo markale albaabka u furay kooxda Barcelona
Dajiye May 15, 2019
(Spain) 15 Maajo 2019. Xiddiga reer France ee Antoine Griezmann ayaa kubadda ugu dhex tuuray garoonka kooxda Barcelona kahor inta uusan furmin suuqa xagaaga ee soo socda, sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha dalka Spain.
Antoine Griezmann ayaa shaaca kaga qaaday fiidiyoow uu soo dhigay bogga rasmiga ah ee Twitter-ka kooxda Atletico Madrid inuu ka tagayo kooxda reer Spain xagaaga soo aadan.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in heshiiska uu ugu biiri doono Griezmann Barcelona wixii xiligan ka dambeeya ay tahay mid ku xiran kaliya kooxda reer Catalonia, kaddib khilaafkii dhex maray labada dhinac xilli ciyaareedkii hore.
Barca ayaa dooneysay inay la saxiixato Antoine Griezmann xagaagii lasoo dhaafay, laakiin ciyaaryahanka reer France ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay ee heshiiska wuxuu iska diiday inuu dhameystiro, isagoo go’aansaday inuu sii joogo kooxdiisa Atletico Madrid.
Yeelkadeeda, kooxda Barcelona ilaa iyo haatan ma aysan qaadin talaabo rasmi ah ay ku soo xero galineyso Antoine Griezmann, lakiin ciyaaryahanka ayaa weli ah bar-tilmaameedka ugu weyn ee kooxda reer Catalonia si uu kaga caawiyo dhanka weerarka.
Balse wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in dhibaatada ugu weyn ee Barcelona kahor taagan dhameystirka heshiiskan inay tahay dhaqaalaha kooxda, kaasoo aan u ogolaan doonin in si toos ah ay u soo iibsadaan laacibka reer France, iyadoo aan la iibinin mid ka mid ah xidigaha kooxda inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
RASMI: Pep Guardiola oo loo magacaabay tababaraha ugu fiican Premier League xilli ciyaareedkii 2018-2019
Kooxda Bayern Munich oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa xidig ka tirsan Manchester City